Tag: angona momba ny orinasa | Martech Zone
Tag: angon-drakitra orinasa
Syncari: mampitambatra sy mitantana angon-drakitra miampita asa, manaova automatique ny onjampeo ary mizara ny fahitana azo antoka na aiza na aiza.
Alakamisy, May 13, 2021 Alakamisy, May 13, 2021 Douglas Karr
Milentika anaty tahirin-kevitra izay miangona ao amin'ny CRM, automatique marketing, ERP, ary loharanom-pahalalana rahona hafa ireo orinasa. Rehefa tsy eken'ny ekipa miasa tena ilaina ny mombamomba ny marina, dia voafehy ny zava-bita ary sarotra ny tratrarina ny tanjon'ny vola miditra. Syncari dia te-hanamora ny fiainana ho an'ireo olona miasa amin'ny ops marketing, ops varotra, ary ops fidiram-bola izay mitolona tsy an-kijanona amin'ny angon-drakitra hahazoana ny tanjon'izy ireo. Syncari dia mandray vaovao
Fidiovana data: torolàlana haingana ho an'ny fanadiovana data
Zoma, Martsa 12, 2021 Zoma, Martsa 12, 2021 Javeria Gauhar
Ny fanamasinana merge dia asa lehibe iray ho an'ny asa aman-draharaha toa ny varotra mailaka mivantana ary fahazoana loharanom-pahamarinana tokana. Na izany aza, maro ireo fikambanana mbola mino fa ny fizotry ny fanamasinana merge dia voafetra fotsiny amin'ny teknikan'ny Excel sy ny fiasa izay tsy dia mahomby loatra amin'ny fanitsiana ireo filàna manatsara ny kalitaon'ny angona. Ity torolàlana ity dia hanampy ny mpampiasa IT sy ny mpampiasa IT hahatakatra ny fizotra fanadiovana merge, ary mety hahatonga azy ireo hahatsapa ny antony tsy ahafahan'ny ekipan'izy ireo manao